एउटा तस्बिरमा देख्न सकिन्छ– अभिभावकले आफ्ना नानीहरुलाई रेलिङ नघाउँदै छन् । सवाल उठ्छ– सन्ततिलाई हामी कस्तो संस्कार सिकाउँदै छौं ? हामीबाट उनीहरुले के सिके ? यो अनुशासनको मात्र विषय होइन, ज्यानै जोखिममा पर्ने सुरक्षाको चिन्ता पनि हो । ट्राफिक नियमको उल्लंघन हो । बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकमात्र होइन, बुझक्कड र शिक्षित युवा पुस्ताले पनि निर्धक्क जथाभावी रेलिङ नाघ्ने र बाटो काट्ने गरेको देखिन्छ– राजधानीका मुख्य सडकहरुमा । त्यतिमात्र कहाँ हो र, त्यसो गर्नबाट अरुलाई रोक्ने जिम्मेवारी भएका सुरक्षाकर्मी पनि रेलिङ फड्किरहेको भेटिन्छ ।
सुरुका दुई तस्बिर काठमाडौं महानगर–६ र बूढानीलकण्ठ–१२ बीचको मिलनचोक तरकारी बजारमा निर्माणाधीन ढलको ह्युम पाइप भएको ठाउँ हो, जहाँ मंगलबार साँझ खसेर बेपत्ता भएका करिब १०/१२ वर्षका बालक बुधबार बेलुकीसम्म फेला पर्न सकेका छैनन् ।
विमानस्थल बाहिर एमसीसीको विरोध [तस्बिरहरू]
अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को विरोध गर्दै युवाहरुको समूहले विमानस्थल बाहिर प्रदर्शन गरेका छन् । एमसीसी खारेज राष्ट्रिय अभियान, मार्क्सवाद अध्ययन समूह, स्वतन्त्र युवा जनसेवक समूह र उन्मुक्त पुस्ताले एमसीसीका विरूद्ध नाराबाजी गर्दै कालो झण्डा प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनकारीहरुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातेमा जे सुमर र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेपाल आउने भनिएसँगै एमसीसीका विरूद्ध प्रदर्शनहरु बढेका छन् ।
सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुले बिहीबार काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शनका क्रममा व्यवसायीहरुले चक्रपथ वरपर गाडीको र्‍याली निकालेका थिए । यातायात व्यवसायीका ७ बुँदे माग तत्काल पूरा गर्नुपर्ने भन्दै सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले प्रदर्शन गरेको हो । महासंघले कोभिड खोप सम्बन्धमा, यातायातको भाडा एवं ट्याक्सीको सुरुवाती कल समायोजन सम्बन्धमा, २० वर्ष पुगेका सवारीको अवधि थप सम्बन्धमा, यातायातको बिमा छुट, यातायातको कागजपत्र नवीकरण र जरिवाना छुट गरिनुपर्ने माग राखेको छ ।
'सम्मानको लागि कोरिएको भित्तेचित्र पुन:स्थापना गर'
कोभिड फ्रन्टलाइनरहरुको सम्मानमा कोरिएको भित्तेचित्र पुन:स्थापनाको मागसहित युवाहरुले प्रदर्शनीमार्ग क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका छन् । केहीदिन पहिले रत्नपार्कको आकाशे पुलमुनि कोरिएको मुरल महानगरपालिकाले मेटाएपछि उनीहरुले महानगरको विरोधसमेत गरेका छन् । उनीहरुले कोभिड फ्रन्टलाइनरहरुको सम्मानमा पुन: चित्र कोरी पाउँ भन्दै मेयरसामू आग्रह गरेका छन् । प्रदर्शनका क्रममा उनीहरुले 'कलाको सहरमा कलाकै हत्या', 'सक्छस् सम्मान गर नत्र अपमान नगर', 'सम्मानको लागि कोरिएको भित्तेचित्र पुन:स्थापन गर' लगायतका नारासहितका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।
खुल्यो आन्तरिक उडान [तस्बिरहरु]
कोभिड–१९ को संक्रमण चेन ब्रेक गर्न वैशाख २० गतेदेखि अनिश्चितकालका लागि रोकिएको आन्तरिक उडान ६९ औं दिनमा बिहीबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ । योसँगै त्रिभुवन विमानस्थलमा यात्रुहरुको चहलपहल बढेको छ । असार ७ को मन्त्रिपरिषद्‌को आदेश अनुसार, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बुधबार आन्तरिक उडानका लागि चारवटा वायुसेवाको तालिका स्वीकृत गरेको थियो । प्राधिकरणले हाललाई जुलाई महिनाभर (असार १७ देखि साउन १६ सम्म) का लागि मात्रै दैनिक ६७ वटा उडान तालिका स्वीकृत गरेको जनाएको छ । यी उडान बिहान साढे ६ बजेबाट सुरु भइ बेलुकी ६ बजेसम्मका लागि हुनेछन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा बिहीबारदेखि निषेधाज्ञा लाग्ने भएपछि बालाजुस्थित नयाँ बसपार्क, कोटेश्वर, बल्खुलगायत ठाउँमा घर फर्कनेको भीड बढेको छ । लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातमा सिट नपाएको यात्रुले गुनासो गरेका छन् ।
साबिक नेकपाको धुम्बाराहीस्थित मुख्यालयमा नेकपा (एमाले)को बोर्ड राखिएको छ । म‌ंगलबार बिहान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लेखिएको बोर्ड हटाएर एमालेको बोर्ड राखिएको हो ।
जिपको ठक्करले सहपाठीको मृत्यु भएपछि कोटेश्वर मल्टिपल क्याम्पसका विद्यार्थीले बुधबार जावलाखेलमा सडक अवरुद्ध पारेका छन् । दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेपछि काठमाडाैंको शान्तिवाटिका र माइतीघर मण्डलामा दिप प्रज्ज्वलन गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासले पुस ५ गते सरकारले गरेको उक्त निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको खुसियालीमा नेकपा दाहाल-नेपाल समूह निकट अनेरास्ववियु, कांग्रेस निकट नेविसंघ, विवेकशील पार्टीले दीप प्रज्ज्वलन गरेका हुन् । यस्तै, रत्नपार्कको शान्ति वाटिकामा नेकपा दाहाल-नेपाल समूह निकट अनेरास्ववियूले पनि सर्वोच्चको निर्णयलाई स्वागत गर्दै दीप प्रज्ज्वलन गरेको छ ।